Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Costa Rica » Costa Rica hadda waxay u baahan tahay caddaynta tallaalka COVID-19
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Costa Rica • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dhammaan xarumaha ganacsiga ee Costa Rica waxay u baahan doonaan caddaynta tallaalka COVID-19 si loo ilaaliyo dadka maxalliga ah iyo booqdayaasha dalka, laga bilaabo Janaayo 8, 2022.
Dhammaan booqdayaasha, iyadoon loo eegin da'da iyo heerka tallaalka, waa inay buuxiyaan foomka elektaroonigga ah ee CAAFIMAADKA CAFIMAAD EE CAAFIMAADKA, ugu yaraan 72 saacadood ka hor safarkooda.
Kuwa la tallaalay waa inay ku lifaaqaan "Kaarka Diiwaanka Tallaalka ee COVID-19" foomka waxayna heli doonaan koodka QR gaar ah oo ay u isticmaali karaan inay ku galaan xarumaha ganacsiga ee dalka.
Laga bilaabo Diisambar 1, 2021 illaa Janaayo 7, 2022, waxaa jiri doona xilli kala guur ah halkaas oo xarumaha ganacsigu ay geli karaan shakhsiyaadka iyaga oo aan lahayn jadwal tallaal oo dhammaystiran, waase haddii ay ku shaqeeyaan awoodda 50%.
Laga bilaabo Jan. 8, 2022, dhammaan xarumaha ganacsigu waxay ku yaalaan Costa Rica waxay u baahan doontaa caddaynta tallaalka COVID-19 si loo ilaaliyo dadka deegaanka iyo booqdayaasha dalka. Caddaynta tallaalka waa in lagu xaqiijiyaa koodka QR ama “Kaarka Diiwaanka Tallaalka ee COVID-19,” oo wuxuu khuseeyaa dhammaan dadka da'doodu tahay 12 ama ka weyn. Goobaha ganacsiga waxaa ka mid ah hoteelada iyo goobaha nasashada, maqaayadaha iyo baararka, adeegyada dalxiiska tacaburrada, casinos, dukaamada, matxafyada, jimicsiga, iyo akadeemiyada fanka iyo qoob ka ciyaarka. Adeegyada muhiimka ah, sida dukaamada cuntada iyo farmashiyeyaasha, uma baahna caddaynta tallaalka COVID-19.
Laga bilaabo Diisambar 1, 2021 illaa Janaayo 7, 2022, waxaa jiri doona xilli kala guur ah halkaas oo xarumaha ganacsigu ay geli karaan shakhsiyaadka iyaga oo aan lahayn jadwal tallaal oo dhammaystiran, waase haddii ay ku shaqeeyaan awoodda 50%. Xarumaha doorta inay ku shaqeeyaan 100% awood waa inay u baahan yihiin caddaynta tallaalka COVID-19.
Costa RicaShuruudaha gelitaanka ayaa ah sida soo socota:
Dhammaan booqdayaasha, iyada oo aan loo eegin da'da iyo heerka tallaalka, waa in ay buuxiyaan foomka elektaroonigga ah ee CAAFIMAADKA CAAFIMAADKA faafa ugu yaraan 72 saacadood ka hor safarkooda. Kuwa la tallaalay waa inay ku lifaaqaan "Kaarka Diiwaanka Tallaalka ee COVID-19" foomka waxayna heli doonaan koodka QR gaar ah oo ay u isticmaali karaan inay ku galaan xarumaha ganacsiga ee dalka.
Soo-booqdayaasha si buuxda uga tallaalay COVID-19 iyo kuwa aan qaan-gaarin ee da'doodu ka yar tahay 18 jir waxay dalka geli karaan siyaasad caymis socdaal la'aan ilaa Jan. 7, 2022. Laga bilaabo Jan. 8, ka dhaafida siyaasadda caymiska safarka waxay khusaysaa oo keliya booqdayaasha la tallaalay iyo kuwa aan qaan-gaarin. Kuwa ka yar da'da 12. Kuwa aan si buuxda u tallaalin waa inay iibsadaan caymiska safarka ee maxaliga ah ama caalamiga ah kaas oo daboolaya COVID-19 iyo kharashyada karantiil, haddii loo baahdo.